Oomama namhlanje yiwebhusayithi ye-AB ye-Intanethi kwaye siyenza ngothando olukhulu, sijongana nabo bonke abazali okanye abantu abanxulumene nelizwe labantwana nolutsha abafuna ukufumana ulwazi malunga nokuba ngumama, ukuba ngutata, ukuba ngumzali, imfundo, ubuchwephesha bengqondo yomntwana, impilo yomntwana, imisebenzi yezandla, iiresiphi zabantwana, izikhokelo zemfundo, iingcebiso kubazali, iingcebiso kootitshala ... Ekugqibeleni, sizinikezele ekuhlalutyeni olona lwazi lubaluleke kakhulu ukuba nawuphi na umzali, okanye nabani na onabantwana okanye abakwishumi elivisayo ababakhathaleleyo, unokukunika umdla. Sikwathetha malunga nosapho, iimvakalelo, isikolo, ukuthanda ukwazi nokunye okuninzi.
Iqela lokubhala lenziwe ngabantu abathi, ngandlela thile okanye enye, banxulunyaniswe kwihlabathi lemfundo kunye nokuba ngumama. Ngokukhethekileyo uxelele yonke into oyifunayo malunga nokukhulisa abantwana bakho. Umxholo esiwunika wona ngowomgangatho ukuze ube nolwazi olulungileyo onalo. Ukuba ufuna ukwazi ukuba singathetha nantoni nawe, ndwendwela iphepha lethu amacandelo!
El Iqela lokuhlela likaMadres Hoy Yenziwe ngabahleli balandelayo:
Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela lokubhala loomama namhlanje, gcwalisa le fomu.
Ukuba ngumzali lihlabathi elinomdla, eligcwele imiceli mngeni enokuba nzima ngamanye amaxesha. Uthando lwabantwana alunasiphelo, kodwa alusoloko lwanele ukusombulula imiba yemihla ngemihla. Ukuyifumana eluswini lwam kwandikhokelela ekubeni ndiphande ngakumbi malunga nokuba ngumama kunye nokuba ngumzali ohloniphekileyo. Ukwabelana ngokufunda kwam, kongezwe kumnqweno wam wokubhala, kuye kwaba yindlela yam yokuphila. NdinguToñy kwaye ndikukhapha kwihlabathi elinomdla elibizwa ngokuba ngumama. .
NdinguAlicia, ndinomdla omkhulu wokuba ngumama nokupheka. Ndiyakuthanda ukumamela abantwana kwaye ndikonwabele konke ukukhula kwabo, yiyo loo nto ukwazi ngabo kundinike amandla okubhala naliphi na icebiso elinokunikwa njengomama.
UMaria Jose Almiron
Igama lam ndinguMaría José, ndihlala eArgentina, kwaye ndinesidanga kwezonxibelelwano, kodwa ngaphezulu kwako konke, ndingumama wabantwana ababini owenza ukuba ubomi bam bubonakale. Ndihlala ndibathanda abantwana kwaye yiyo loo nto ndikwangutitshala ke oku ukuba nabantwana kulula kwaye kuyonwabisa kum. Ndiyathanda ukuhambisa, ukufundisa, ukufunda nokumamela. Ingakumbi xa kuziwa ebantwaneni. Ewe kunjalo, ukubhala ngolu hlobo kukuba apha ndongeza usiba lwam kuye nakubani na ofuna ukundifunda.
Molo! Ndiyakuthanda ukubhala kwaye ndinomdla, ngobizo noqeqesho, ngobuchule kunye nokufundisa, ezimbini zezinto apho oomama bafunda khona ukwenza iwotshi kwaye ke babe ziingcali zokwenyani zabantwana babo.
Isidanga kwi-Philology yesiNgesi, umthandi weelwimi, umculo olungileyo kwaye uhlala enobizo njengotitshala. Nangona lo msebenzi ungadityaniswa nokubhalwa komxholo kwaye ngakumbi nokuba ngumama. Umhlaba esiwufundayo, uziva kwaye ufumanisa yonke imihla kunye nabantwana bethu, ukuba wophulwe apha.
Umama, umfundisi-ntsapho onyangayo, ugqirha wengqondo kunye nomdla wokubhala nonxibelelwano. Abantwana bam bandifundisa ukuba ngumntu ongcono kwaye ndibone umhlaba ngokwahlukileyo, enkosi kubo ndifunda ngokuqhubekayo ... Umama utshintshe ubomi bam, mhlawumbi ndidiniwe kodwa ndihlala ndonwabile.
Molo, ndibhala phantse nasiphi na isifundo kuba bendingenakwenza ngenye indlela. Ukuhanjiswa kweembono, amaxabiso kunye nolwazi kubonakala kubalulekile kum. Ingakumbi umxholo wemfundo, ulawulwa okanye awukho, kunye noqeqesho kubantwana nakwishumi elivisayo kubonakala kunomdla kakhulu kum.
Isayikholojisti inomdla wobukrelekrele bemvakalelo kunye nophuhliso lomntu. Ndiyathanda ukwenza konke okusemandleni ukuze abantwana nabazali babo baphile, kwaye okona kubaluleke kakhulu: yonwabani, kuba akukho nto intle njengokubona usapho olumanyeneyo.
Ndingutata wabantwana ababini abahle kwaye ndiyayithanda yonke into enxulumene nokufundisa kunye nemfundo. Ukukwazi ukubhala ngooMama namhlanje kuyandinceda ukuhambisa yonke into endiyifundileyo kule minyaka idlulileyo njengotata kunye nomyeni wosapho oluhle.
I-14 kunye nesiqingatha kwiminyaka eyadlulayo ndadibana notitshala wam omkhulu, kwiminyaka emibini kamva umntu ophila ngegama lakhe (Sofia) weza emhlabeni; Abafani nabantwana bam amaphupha am kuba abhetele kakhulu ... ndinomdla wokukuxelela izinto malunga noko ndikufundayo ... nokuba undixelele.
UAna M. Longo
Ndazalelwa eBonn (eJamani) e1984 kwaye ndiyintombi yamaGalician nabazali abafudukayo. Abantwana bahlala bebhekisa ebomini bam. Ngapha koko, ndiye ndafunda iBachelor of Pedagogy kuba bendisazi, ndisemncinci, ukuba umsebenzi wam kufuneka unxulumene nabo, kwaye ndikhe ndaba ngumkhathaleli wabantwana kunye notitshala wabucala ngamanye amaxesha. Ndiyayithanda into endiyenzayo, kwaye ndiyathemba ukuba iya kubonakala kumanqaku am.
Ndingumama wabantwana ababini endifunda nabo kwaye ndikhula yonke imihla. Ukongeza ekubeni ngumama, esithi "sisihloko" endizidla kakhulu ngaso, ndinesidanga se-BA kwi-Biology, iGcisa leZondlo kunye neDeetetic, kunye ne-Doula. Ndiyakuthanda ukufunda nokuphanda ngayo yonke into enxulumene nokuba ngumama nokuba ngumzali. Okwangoku ndidibanisa umsebenzi wam ekhemesti kunye nezifundo kunye neeworkshops endizifundisayo kwizihloko ezahlukeneyo ezinxulumene nokuba ngumama.
Ndingumdlezana, ndingumama kwaye kudala ndibhala ibhlog. Ndixhalabile kakhulu ngayo yonke into enxulumene nokuba ngumama, ukukhuliswa kunye nokukhula komntu wasetyhini. Kuphela ngokwazi kakuhle apho sinokuthi sithathe isigqibo sokuba yintoni elungele thina nosapho lwethu.
UMaria Madroñal umfanekiso obambe indawo
Umama wokukhanya okukhuthazayo, umfundisi-ntsapho wexesha elizayo, umhlobisi wezobuchwephesha, umbhali ongunaphakade kwizithunzi, ingcibi, imvumi kunye nomqambi, ofundisa yonke into, utitshala ongenanto. Ngokuthandana nemfundo, umculo kunye nobomi ngokubanzi. I-Positivist kwi-extremis, yonke into inecala elilungileyo kwaye ukuba ayenzi njalo, ndiza kuba noxanduva lokuyila. Ecaleni komncinci wam, yonke into ilula kakhulu.
Ndiyingcali yeengqondo kunye nombhali, ukuthanda kwam kukubhala kunye nabantwana. Ndibanceda ukuba baphucule izakhono zabo ezisisiseko, ukudibanisa kweli hlabathi linzima ukuze bafunde ukonwaba nokuzimela. Ukusebenza nabo kuyinto entle engapheliyo.
Igama lam ndinguAle kwaye ndingumFundisi waBantwana aBasaqalayo. Andikabi ngumama okwangoku, nangona kwikamva ndingathanda ukuba ngomnye kuba ndibathanda abantwana. Ndiyakuthanda nelizwe lokupheka, ubugcisa nokuzoba, yiyo loo nto ndiqinisekile ukuba ndingakunceda kakhulu ngemfundo yabantwana bakho.
Umama ngokwenza, u-YouTuber ngamanye amaxesha kunye neTekhnoloji yeLabhoratri ePhakamileyo. Ndilifezekisile iphupha lam lokuba ngumama omncinci, yonke imihla yinto entsha, kwaye anditshintshi nantoni na! Ndiyathanda ukwaziswa ngayo yonke imiba ekhoyo ngoku malunga nokukhuliswa kwabantwana bethu kwaye sabelane ngezinto endizifundayo kunye nani nonke. Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba abantwana banamhlanje banokutshintsha ikamva loMhlaba wethu.
Molo! Ndiyingcali yezentlalo kwaye ndiyabathanda abantwana. Ndenza iividiyo malunga nezinto zokudlala ezithandwa kakhulu ngabancinci endlwini. Ukongeza kokonwatyelwa bona, baya kuba nakho ukufumana ulwazi oluya kubanceda kwinkqubo yabo yemfundo kunye noluntu, bafunde ukunxibelelana nosapho lwabo kunye nendalo engqongileyo ngendlela esempilweni neyonwabileyo.
Umama onekratshi wenkwenkwe ekwishumi elivisayo. Ngokuthanda ubomi kunye nendalo. Umthandi woncwadi, ukufota kunye nomdaniso ukusukela ebuntwaneni bam. Uzifundise ngokwendalo kunye nenani elingenasiphelo leeprojekthi endiphupha ngazo. Ngokukodwa kwi-psychology yomntwana, umsebenzi wam ngumnqweno wam. Ndihlala ndimangaliswa ngumnqweno wokufumana abantwana wokufumanisa kunye namandla abo okudala.
Umnqweno wam wemfundo undikhokelele ekubeni ndifunde iMfundo yaBantwana aBasaqalayo kuqala kunye nomsebenzi wobugcisa bokufundisa. Kwaye umdla wam (kwimida engalindelwanga), undikhokelele ekubeni ndiphande izihloko ezinxulumene nemfundo yeemvakalelo, uqeqesho oluqinisekileyo kunye nokuba ngumzali ohloniphayo.
Ndinomdla, ndingenaxhala kwaye andingqinelani, nto leyo endenza ndibuze phantse ngokuqhubekayo ilizwe elisingqongileyo, ngakumbi into enxulumene nokuba ngumama kunye nokukhuliswa, apho kuhlala khona intsomi kunye neenkolelo zobuxoki. Ndiyathanda ukufikelela kwingcambu, kwisizathu kwaye ukusuka apho, ukwenza isenzo. Ndiqeqeshelwe ukuncancisa nasekuthinteleni nasekukhuthazeni impilo yabantwana.
Oko bendimncinci bendinomdla wokufundisa abancinci kwaye ndidlala nabo. Ndiyathemba ukuba ngamanqaku am ndingakubonisa zonke izibonelelo zemisebenzi yosapho.